အပေါ်နစ်ခ် Carter ကရဲ့ဆောင်းပါးများ Martech Zone |
ဆောင်းပါး နစ်ခ် Carter က
တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 1, 2012 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 1, 2012 နစ်ခ် Carter က
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်အဆက်အသွယ်များကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်အချို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံစီမံခန့်ခွဲမှုများကို အသုံးပြု၍ အဆက်အသွယ်များကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်ကြောင့်သေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်သို့ထိုးကျသွားသည်မှာထင်ရှားနေသည်။ ဒါပေမယ့်၊ ဒီအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအဆက်အသွယ်အချက်အလက်တွေနဲ့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ ငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာတွေကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်တယ်။ စစ်တမ်းရလဒ်အပြည့်အစုံကို AddressTwo တက္ကသိုလ်မှတွေ့ရှိနိုင်သည်။
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 16, 2011 နစ်ခ် Carter က
ငါ @ kyleplacy နှင့် @ edeckers ၏“ Branding Yourself” စာအုပ်ကိုကောက်ယူပြီးကတည်းကငါနုနယ်သေးတဲ့နည်းပညာစတင်မှုမှာအစောပိုင်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက Addy ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူသည်ဆော့ဖ်ဝဲ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ထိုထက်မကသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးကျေးကျွန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော့်ရည်မှန်းချက်ကလူတွေဟာသူမနဲ့သူမကိုသူနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင် AddressTwo နဲ့ပိုပြီးဆက်စပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒါအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ဒီနေ့ငါ
App Store ကို“ Add to Home Screen” ဖြင့်ရှောင်ပါ။
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 22, 2011 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 23, 2021 နစ်ခ် Carter က
ငါသိကောင်းသိပေမည်၊ သို့သော်ငါ Mac ပရိသတ်တစ် ဦး တော့မဟုတ်ပါ။ အိုကေ၊ ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမခံရပ်နိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မလက်ကိုမချနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အစပြုခဲ့ပါပြီ။ ထင်ရှားကျော်ကြားသော iPhone အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် Mac ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြင့်သာဖွံ့ဖြိုးပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကျော်ရမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အိုင်ဖုန်းစျေးကွက် -changer နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖြည့်တင်းရမည်ဖြစ်သည်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြားခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့သင်
ကျွန်ုပ်၏ Facebook အသုံးဝင်နိုင်မှု Rant
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 5, 2011 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 နစ်ခ် Carter က
စာဖတ်သူတွေကိုမျှဝေဖို့ကျွန်ုပ်မှာသတင်းအချက်အလက်အသစ်မရှိဘူးကိုကြောက်တယ် Martech Zoneသင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ပဲအသနားခံ။ အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် - ကျွန်ုပ်လွဲချော်ခဲ့သည့်အရာများရှိပါကကျွန်ုပ်အားပြောပါ၊ သို့မဟုတ် ... သင်၏လက်ချောင်းများသွေးထွက်သည်အထိ Facebook status တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရန်ဤ status update ကို retweet လုပ်ပါ။ [youtube: http: //www.youtube.com/watch? v = 5G-90bZXVjw]
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 28, 2011 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 နစ်ခ် Carter က
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ AddressTwo ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာတာနဲ့အမျှအကောင်းဆုံးအတွေးအခေါ်သစ်တွေနဲ့ပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်စိတ်ကူးသစ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာဒိုဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးဘယ်ဘက်နဲ့ညာ micro-sites တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းစိတ်မရှည်ဘူး။ တနင်္လာနေ့တွင်ကျွန်ုပ်၌အကြံဥာဏ်ရှိသည်၊ အင်္ဂါနေ့တွင်၎င်း၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ယာဉ်အသွားအလာလိုသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကကျွန်တော့်အသစ်မတိုင်မီရက်အနည်းငယ်လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်
တိကျသောသော့ချက်စာလုံးတစ်ခုအတွက် landing စာမျက်နှာများ၏ဆက်စပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် Youtube ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတွင်မည်သို့သွားသည်ကိုဆိုလိုသည်မှာ URL တွင်သင်၏သော့ချက်စာလုံးပါသည့်တုံးတိုနှင့်ကွဲနေသော landing page တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ၎င်းသည်စကားလုံးများအားကွဲပြားခြားနားစွာရှုမြင်ရန် bot များအတွက်သင်ရည်ရွယ်သောစကားစုနှင့်သင်၏ဆက်စပ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒီဥပမာအတွက်၊ ငါ http://www.addresstwo.com/small-business-crm/ ကိုသုံးပြီးသင်ထည့်သွင်းမည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
Half-Life နည်းပညာ - ဘယ်တော့မှ Bootstrap လုပ်မထားဘူး
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2011 တနင်္လာနေ့မတ်လ 7, 2011 နစ်ခ် Carter က
ငါကောလာဟလအနည်းငယ်ဖယ်ရှားပစ်ချင်ပါတယ် ငါအကျိုးတူအရင်းရှင်မှဆန့်ကျင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းကင်တမန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်နတ်ဆိုးများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ လူတိုင်းကသူတို့လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်စွာ bootstrap လုပ်သင့်သည်ဟုပင်မထင်။ ဒါကိုသက်သေပြရန်ငါနှင့်သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်သင်၏ငွေကြေးဖောင်းပွသောစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကိုရှက်ရွံ့စွာမြှင့်တင်ရန်သင်၏ငွေနှင့် Half-Life - Half-Life ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြောင်းပြချက်ပေးသင့်သည်။ "startup" ဆိုတဲ့စကားလုံးလိုပဲ
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 3, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 နစ်ခ် Carter က
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်မားသောပညာတတ် (ပညာတတ်များပြားသည့်) လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်သင်ရောနှောသောအခါသင်ဘာရသနည်း။ သင်တန်း၏အတိုင်ပင်ခံ။ သူတို့အများကြီး။ တကယ်လို့သင်ဟာ ၂၅ နှစ်လုံးလုံးကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်မင်းကမင်းကိုအလုပ်ရှင်ကသင့်ကို“ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမာစတာ” ဖြစ်လာဖို့သင့်ကိုလခပေးဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုလုံးဝပေးဖို့မရပ်တန့်ခင်မှာပဲ…ဘယ်သူကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ဖို့ပိုကောင်းသလဲ။ ! အပြေးတစ် ဦး ဟာသရှိပါတယ်